सुगौली सन्धिः भ्रम र वास्तविकता
मंगलवार, आश्विन १२, २०७८ ०३:२९:२६ युनिकोड
शुक्रवार, श्रावण ३१, २०७६ यार्सान्यूज
नेपाल र तत्कालीन इष्ट इण्डियाबीच सुगौली सन्धिमा हस्ताक्षर भएको सुगौली कहाँ पर्छ भन्ने विषयमा सामाजिक सन्जालहरुमा बहस छ । कतिपय इतिहासकारहरुले सुगौली नेपालको मकवानपुरमा पर्दछ भनेर लेख्दै बोल्दै आएका छन् । सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठले नै आफ्नो पुस्तक “नेपालको सिमाना“ (दोस्रो संस्करण, २०६१) को पृष्ठ ५८ मा नेपालको तर्फबाट प्रतिनिधिस्वरुप चन्द्रशेखर उपाध्यायले सहीछाप गरी मकवानपुरको सुगौली भन्ने स्थानमा दिनको २स्३० बजे अँग्रेजलाई हस्तान्तरण गरेका थिए भनेर लेखेका छन् (हेर्नुस् तस्बीर) । तर सुगौली मकवानपुरमा पर्छ भन्नु गलत तथ्य हो । सुगौली सन्धिताका सुगौलीमा रहेको ब्रिटिश क्याम्पबाट अँंग्रेज अफिसरहरुले कलकत्ता पठाएका पत्रहरु मैले पनि पढेको छु (हेर्नुस् सन् १८१५ अगष्ट २३ का दिन सुगौली क्याम्पबाट पी. ब्राड शाले लेखेको पत्र) । सुगौली नेपालको मकवानपुरमा पर्दथ्यो भने त्यहाँ सन् १८१५ अगष्टमै ब्रिटिशहरुको क्याम्प हुँदैन्थ्यो । अँग्रेजहरु सन् १८१६ फेब्रुअरीमा मात्रै काठमाडौँमाथि आक्रमणका लागि भिक्षाखोरी (हाल अमलेखगंज) हुँदै मकवानपुर पुगेका हुन् ।
सुगौली सन्धिको कुरा गर्दा नेपाल र इष्ट इण्डिया कम्पनीबीच युद्धविराम भएपछि सन् १८१५ डिसेम्बर २ मा अँग्रेजका तर्फबाट पी. ब्राड शाले नेपालसमक्ष ‘शान्ति तथा मैत्री सन्धि’को मस्यौदा पठाएका थिए । उक्त मस्यौदा सन्धिको धारा धारा ३ मा नेपालले काली र राप्ती, राप्ती र गण्डक, गण्डक र कुशाहा (कोशी), मेची र टिष्टा नदी बीचको सम्पूर्ण समथल भूभाग तथा मेची पूर्वका पहाडी भाग र नागरी किल्ला ४० दिनभित्र खाली गर्नुपर्ने उल्लेख थियो । धारा ४ मा परित्यक्त्य भूभागका कारण नेपाल राज्यका प्रमुख तथा भारदारहरूले सहनुपर्ने क्षतिको बदलामा कम्पनी सरकारले वार्षिक २ लाख रुपियाँ निवृत्तिभरण दिने शर्त थियो । यस्ता अरु पनि नेपालको प्रतिकूलका शर्त थिए । सोही कारण नेपालले उक्त मस्यौदा सन्धि अस्वीकारेको थियो । बदलामा नेपालले युद्ध नै जारी राख्ने निर्णय गरेको थियो । अँग्रेजसँगको थप लडाइँमा नेपालले चिनियाँ सहयोग समेत चाहेको थियो । तर नेपालले चिनियाँ सहयोग पाएन । युद्धका कारण नेपाल आर्थिकरुपमा कमजोर बनेको थियो । सोही कारण नेपालले उक्त मस्यौदा सन्धिमा थप वार्ता चलाएको थियो । त्यसपछि नेपालका तर्फबाट गजराज मिश्र र चन्द्रशेखर उपाध्याय तथा अँग्रेंजका तर्फबाट कर्नल ब्राड शाले सुगौलीमा सो सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका थिए । उक्त सन्धि १५ दिनभित्र नेपालका राजाबाट अनुमोदन गराउने उद्देश्यले गजराज मिश्र काठमाडौँ फर्केका थिए तर नेपालले फेरि सन्धिमा असहमति जनायो । त्यसपछि सन् १८१६ फेबु्रअरीमा अक्टरलोनी आफैँ काठमाडौँ हान्न भिच्छाखोरी (हाल अमलेखगञ्ज) पुगेका थिए । सन् १८१६ फेबु्रअरी २७ मा अँग्रेज सेना
मकवानपुरगढीनजीक पुगेको थियो । सो लडाइँमा नेपालतिर ८ शय र अँग्रेजतिर २२२ सैनिकको मृत्यु भएको थियो । अन्ततः बाध्य भएर नेपाल अँग्रेजद्वारा प्रस्तावित सन्धि मान्न बाध्य भएको थियो । सो सन्धिमा मकवानपुरमा १८१६ मार्च ४ का दिन गजराज मिश्र र चन्द्रशेखर उपाध्याय दिउँसो २ः३० बजे अंग्रेज प्रतिनिधिसँग हस्ताक्षरित सम्झौता आदान प्रदान गरेका थिए । त्यसैले सुगौली सन्धिको मस्यौँदा सन्धिमा विहारको सुगौलीमा हस्ताक्षर भएपनि फाइनल सन्धि नेपालको मकवानपुरमा हस्ताक्षर भई आदान प्रदान भएको हो ।
प्रकाशित मिति: शुक्रवार, श्रावण ३१, २०७६, १२:१०:००